Maninona ny vazaha no tsy mampiasa tsatokazo rehefa manjono? Tian'izy ireo ny mampiasa kofehy manjono!
Any Chine dia mbola misy mpanjono marobe izay mbola mampiasa ny fomba fanjonoana mahazatra amin'ny tehina jono, saingy zara raha misy ny fanjonoana any ivelany, ary aleon'izy ireo mampiasa rojo fanjonoana amin'ny jono. Inona no antony? Fa maninona no misy fahasamihafana toy izany? Manaraka, araho ny KK hijerena! 1 area Fanjonoana faritra ...
Inona no maha samy hafa ny sambo mpanjono manana savaivony kaopy 3000 sy savaivony 4000 ny kaopy?
Misy fahasamihafana telo eo amin'ny sambo mpanjono 3000 sy 4000. Ny halavan'ny tsipika fanjonoana dia samy hafa ao anaty kaopy, ny hafainganam-pandehan'ny fandraisana, ary ny lanjan'ny sambon'ny mpanjono dia samy hafa; Rehefa mampiasa sambo fanjonoana an-dranomasina, matetika ny marika maodelin'ny sambo mpanjono dia ...
Tsy sarotra ho an'i Lure ny misafidy ny lalana tokony hanjonoana tsara amin'ny fomba mety
Na dia tsy tsara toy ny an'ny any ivelany aza ny harena an-trano amin'ny fisintomana, dia tsy midika izany fa tsy misy trondro mankany Lure. Amin'ny maha-iray amin'ireo trondro ankafizin'ny Lure, qiaozui dia malaza be amin'ireo olona Lure. Ny tena antony dia satria mampientanentana kokoa ny vavan'ny Lure, indrindra ny tsia ...
Vokatra andian-dahatsoratra YAMASHITA
—— SEARCH LIVE —— Vakana vita amin'ny peratra vita anaty volo, ny vatana mamirapiratra dia nofonosina lamba mafana mafana, ary ampitahaina amin'ny halavan'ny halavan'ny 490 hazavana hitan'ny squi ...
Tsy manontany ny loharano ilay maherifo? Ity no fomba fanjonoana manambany indrindra ataon'ny mpanjono any Taiwan!
Vao tsy ela akory izay, fomba fanjonoana iray no nanafika ny Internet. Ity fomba fanjonoana ity dia mila tehina iray sy tsipika iray fotsiny. Tsy ilaina ny fandosirana, indrindra ny fanitsiana! Fanjonoana tsorakazo mankaleo ity! "Tompon'ny jono Taiwaney" maro no mety maneso ity fomba fanjonoana ity ary mivantana ...
Vokatra andiana maria
—— DUPLEX —— Ny Mino mahazatra, tsy maintsy ananana amin'ny jono an-dranomasina, no kintan'ny telo maranitra maranitra —— LEGATO F190 —— ...
Fanjonoana ririnina, alao ny "trondro" no lakileny!
Ny fahazoana ny fahazaran'ny trondro dia ampahany lehibe amin'ny fanatsarana ny haavon'ny jono! Fantatsika rehetra fa sarotra ny trondro trondro amin'ny ririnina, saingy fantatrao ve ny fahazaran'ny trondro lasibatra isan-karazany amin'ny ririnina? Rehefa haintsika tsara ny fahazaran'ny trondro amin'ny ririnina, vao afaka manova ny maunu, andalana ...
Ny jono lehiben'i Kawakami, ahoana ny fomba hiatrehana ny ranomasina feno fotaka?
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-11-24
Vao avy niaina ny mpitondra tenin'ny rivo-doza YAMARIA i Shenzhen Andriamatoa Hideyo Kawakami sy Andriamatoa Guo Ji, lehiben'ny China Tonga teto taty aorian'ny rivo-doza Miomana hitsapana trondro tratry ny rivotra mahery Taorian'ny fitsapana be dia be i Yangmei Keng no voafidy ho toerana hanaovana io jono io. ny ranomasina misamboaravoaran'ny rivotra ...
Horita, hena, hena, sifotra, inona no mahasamihafa azy ireo?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-11-19
Iray, hafa ny lohahevitra 1. Octopus Bai: Octopodidae. 2. Squid: Du fianakavian'i Calamari, Family Decarbonidae. 3. Squid: baiko moka Radix Aconzhi Sidae. 4.Cuttlefish: Tenebrionidae, Order Decarbida. Roa ， Toetra mampiavaka ny morpholojika 1. horita: fohy sy boribory boribory ny vatan'ny horita ...
Kitapo mamirapiratra amin'ny jono amin'ny vidiny ambongadiny
Ny Glow With Us dia manolotra hazomainty manjono faran'izay avo lenta amin'ny vidin'ny ambongadiny ambany. Ny hazavainay manjelanjelatra dia sariaka amin'ny tontolo iainana, vaky sy tsy mahazaka ary manaporofo ny hamandoana. Ahoana no fiasan'ny hazavan'ny jono? Ny hazavan'ny Fishing Glow Sticks dia mampiasa fihetsika simika hamoahana hazavana. Raha vao ny ao anatiny ...
Beacon vs sticks glow mora foana .. maninona aho no niova ho ireo mora vidy kokoa taorian'ny fampiasana ny marika marika nandritra ny taona maro.
Fiheverana manokana: Ny fonosana ataontsika: 2pcs / kitapo, 50bag / boaty anatiny, orinasa 100 pcs hafa eo amin'ny famonosana lampihazo: 5pcs / kitapo, 10bag / boaty anatiny, 50 pcs totaliny Ny vidin'ny orinasa misy anay no ambany indrindra. Tsy orinasam-barotra izahay fa manome ny tombotsoan'ny olona afovoany mivantana amin'ny mpanjifantsika ....
Ny fampandrosoana ny indostrian'ny jono
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-10-09
Raha ny antontan'isa tsy feno navoakan'ny Fikambanana Jono Sinoa tamin'ny 2015, dia manodidina ny 120 tapitrisa ny olona manjono any Shina (ny isan'ny olona manatrika fanjonoana farafahakeliny inefatra isan-taona). ny ...